कनकाई नगरपालिकाद्वारा कोरिया जानेको खर्चको विल सार्वजनिक, कोरिया पुगेका र स्थानिय यस्तो भन्छन ! - Aamsanchar
सोमवार, चैत ७, २०७८
कनकाई । झापाको कनकाई नगरपालिकाले कृषि सम्बन्धी पाँच महिने तालिमका लागि कोरिया पठाएका व्यक्तिहरुकोलागि प्रकृया लगात खर्चको विलहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले प्रति व्यक्ति ३ लाख ८० हजार लागत खर्च भएको विलहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पत्रकार भेट घाट कार्यक्रममा उपप्रमुख मञ्जु प्रसाईंलगायत कार्यपालिका सदस्यहरुको उपस्थितीमा विलहरु सार्वजनिक गरिएको थियो । बाँकी विलहरु संकलन गर्ने काम भईरहेको बताईएको छ ।
कनकाई नगरपालिकाबाट गएका १६ जना मध्ये एक जना कनकाई–८ लक्ष्मीपुरका दिनेश न्यौपाने कोरियामा मेडिकल फेल भएर फर्के पछि न्यौपानेले नगरपालिकाले आफूलाई ठगी गरेको भनेर मिडिया मार्फत आरोप लगाएपछि कनकाई नगरपालिकामा बहसको विषय बनेको छ ।
पिडित भनिएका न्यौपानेलाई एक मिडियाले लिएको अन्तरर्वातामा आफूलाई नगरपालिकाले ठगी गरेको भनेर भनेका छन् । उनको भनाई सार्वजनिक भए पछि कनकाई नगरपालिकामा पक्ष र विपक्षमा नारा जुलुस देखि छलफल सम्मका कामहरु भईरहेको छ । एउटा पार्टीको भात्री संगठनका नेता कार्यकर्ताहरुले नगरपालिको गेटमै मुर्दावादको नारा समेत लगाएका थिए ।
उता कोरिया जाने प्रशिक्षार्थी मध्येका कनकाई–७ का टंकप्रसाद उप्रेतीका भाई लक्ष्मी उप्रेतीले आफ्नो दाजुको भनाईलाई उर्दित गर्दै भनेका छन्, ‘कनकाई नगरपालिकाले राम्रो काम गरेको छ । कोरियाको एक नगरपालिका संग भगिनी सम्वन्ध कायम गरेर कनकाईका युवाहरुलाई कोरियामा पाँच महिना सम्म रोजगारी र कृषि तालिम लिने अबसर जुराई दिएको छ । नगरपालिकाले खर्चको बारेमा सबै कुरा पहिले नै जानकारी गराएको थियो । ३ लाख ८० हजार मै कोरिया जान पाईने भएपछि हामिले सुलभ र सहज अबसर प्राप्त गरेका छौं । मेडिकल फेल भएर फर्किनु भएका न्यौपानेको वक्तिगत कारणले नगरपालिका र मेयर राजेन्द्रकुमार पोखरेलको बदनाम गर्ने काम गरिनु हुदैन यहाँ हामि सबैलाई राम्रो छ । आउदा दिनमा अरु साथीहरुले पनि यो अबसरबाट बन्चित हुनु नपरोस् ।’
त्यस्तै कनकाई–३ का देवेन्द्र घिमिरे पनि एकै प्रक्रियाबाट कृषि तालिमको लागि कोरिया पुगेका छन् । बाहिर आएको कुरा अनुसार के उनि पनि नगरपालिका वा मेयर पोखरेलबाट ठगीमा परेका छन् भनेर आमसंचारले देवेन्द्रका दाई नगेन्द्र घिमिरेलाई राखेको प्रश्नमा नगेन्द्रले भने ‘नगरपालिकाले हामिबाट कुनै रकम लिएको छैन । रुपिया कतै हिना बिना भएको जानकारी छैन् । जसरी मिडियामा रकम हिनामिनाको कुरा आएको छ त्यो कुरामा कुनै सत्यता छैन । नगरपालिकाले अवसर प्रदान गरेको हो, लाग्ने रकमको बारेमा जाने आफैले कहाँ कहाँ लाग्छ त्यही त्यही तिरेर गएका हुन् । गएको दुई महिना भयो लागेको सम्पूर्ण खर्च रकम कमाएर पठाई सकेको छ । कुनै पनि समस्या छैन,हिजो मात्र भाई संग मेरो कुराकानी भएको छ । फर्केर आउने दिनेश न्यौपाने मेरै भाई संगै एकै कोठामा बसेका रहेछन् । मैले पहिले थाहाँ पाईन थाहाँ पाएको भए म पनि आवेदन दिने थिए । एक पटक गएर आउनेले फेरी दोहोर्याएर जान पाउने रहेछन् तर मैले भाईलाई सिप सिक्न पठाएको हो । सिप सिकेर आउने छ । यसमा नगरपालिकाले अवसर प्रदान गरिदिएकोमा खुसी छौं ।’
कनकाईबाट कोरिया गएका देवेन्द्र घिमिरेका दाई नगेन्द्र घिमिरेले यस्तो भने
‘झापामा रहेका १५ वटा पालिका मध्ये उत्कृष्ट पालिकाको सम्मान समेत पाएको कनकाई नगरपालिका मेयर राजेन्द्र पोखरेल साधा जीवनशैली र विकास प्रेमी रहेको पाएका छौं । नगरको हित र विकासमा काम गर्ने पोखरेल कुन पार्टीबाट जनप्रतिनिधी भएका हुन भन्ने कुराले नागरिकका लागि कुनै अर्थ राख्दैन, नगरको समग्र क्षेत्रमा कार्यसम्पादन राम्रो देखेका छौं । काम गर्ने क्रममा सानातिना त्रुटिहरु हुनसक्छ । कोरिया पठाउने क्रममा केही कानुनी त्रुटी देखाईएको छ । तर त्यो पनि नगरबासीको हितका लागि गरिएको हो । प्रक्रिया पुरा नभएको भए प्रक्रिया पुरा गराउने निकायहरुले चै के हेरे ? प्रक्रिया पगेको थिउन भने अध्यागमनले किन जान दियो उसलाई गर्ने प्रश्न मेयरलाई गर्नुको कुनै तुक हुदैन । राम्रो काम गर्नेहरुको मनोवल गिराएर क्षमता विहिनहरुले नगरको नेतृत्वमा बस्न पाईन्छ की भनेर न्यौपानेलाई ढाल बनाएर मेयर र नगरपालिका प्रति हिलो छ्याप्ने काम भईरहेको स्थानिय विकास उप्रेतीले बताए ।